Utopia: Nidaamka xiisaha leh ee baahinta P2P oo ku habboon Linux | Laga soo bilaabo Linux
Maqaalkayaga maanta wuxuu ku saabsan yahay a xiiso leh oo ka duwan Mashruuca IT taasi waxay u shaqaysaa sidii a xalka teknolojiyadda oo dhan iyo a madal online taasi waxay isku daraysaa sida ugu fiican Dunida DeFi la socota Dunida GNU / Linux. Magacaaguna waa "Utopia" taas oo marka la eego, si aad ah uga tarjumaysa baaxadda ujeeddooyinkeeda.
"Utopia", asal ahaan waxay ku xiran tahay hal -abuurayaashii a dhammaan hal xirmo si aad u isticmaasho fariin deg -deg ah oo sugan, isgaarsiinta iimaylka oo qarsoon, lacag -bixin aan la garanayn, iyo daalacashada shabakadda gaarka loo leeyahay. Waxa intaa dheer, waxay ku habboon tahay in la isticmaalo Nidaamka Howlgalka GNU / Linux, tan, waxay u oggolaaneysaa inay lacag ka dhigato isticmaalkeeda si fudud oo aad u badan Xusuusta RAM (4 GB) la heli karo iyo cinwaanka IP -ga dadweynaha ee go'an.
Baaxadda tan Mashruuca IT Aad bay isugu egtahay, laakiin way ka xoog badan tahay kuwa kale ee la midka ah ee aan hore u sahaminay oo wadaagnay. Sidaa darteed, isla markiiba waxaan uga tagi doonaa xiriiriyeyaasha la sheegay qoraallo hore oo la xiriira mashaariicdan, si haddii loo baahdo si fudud loogu akhriyo:
"Adamant waa codsi fariin deg -deg ah oo il furan oo ku saleysan tikniyoolajiyadda xannibaadda, taas oo iyaduna u adeegta jeebka Crypto iyo Nidaamka Sarrifka Cryptocurrency (Exchange). Adamant waa mid dhinacyo badan leh oo baahsan iyada oo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda xannibaadda, oo la mid ah kuwa kale sida Juggernaut, Sphinx iyo Status. Tan iyo, Juggernaut, Sphinx iyo Status, kaliya maahan faa'iidooyin xiiso leh sida codsiyada farriinta, laakiin waa farsamo ama hab lacag bixin, maadaama ay ku saleysan yihiin Farsamada Blockchain".
1 Utopia: Fariin deg -deg ah, Bixinta, iyo Daawashada Gaarka ah
1.1 Waa maxay Utopia?
1.2 Maxay Utopia siisaa adeegsadeyaasheeda?
1.3 Sida loo hirgeliyo Utopia GNU / Linux?
1.4 Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Bot Mining
1.5 Adigoo adeegsanaya qasabadda si aad u hesho qayb bilaash ah oo ah Crypton (CRP)
2 Macluumaad intaas ka badan oo la xiriira
Utopia: Fariin deg -deg ah, Bixinta, iyo Daawashada Gaarka ah
Waa maxay Utopia?
Sida laga soo xigtay soosaarayaasha tan Mashruuca DeFi in uu degel rasmi ah, "Utopia" waxaa si kooban oo toos ah loogu qeexay sida:
"A Xirmada hal-hal ah ee adeegsiga farriimaha deg-degga ah ee sugan, isgaarsiinta iimaylka ee qarsoon, lacag-bixinnada qarsoodiga ah, iyo daalacashada shabakadda gaarka loo leeyahay. Ama si kale loo dhigo: Qalabka ugu fiican ee khadka tooska ah ee farriimaha deg -degga ah, lacag -bixinta iyo daalacashada khaaska ah".
Halka, si cad oo faahfaahsan, ay intaas ugu darayaan "Utopia" es:
"Badeecad si kor loogu qaado xorriyadda, qarsoodiga iyo maqnaanshaha faafreebka, oo loogu talagalay isgaarsiin sugan, lacag -bixinno qarsoodi ah iyo adeegsi internet oo xor ah oo aan xuduud lahayn. Ilaalinta guud, xakamaynta socodka macluumaadka, iyo been -abuurka rasmiga ah ayaa ah waxa Utopia ujeeddadeedu tahay inay ka hortagto. Markaad isticmaasho Utopia, Walaal weyni mar dambe kuma daawan doono.
Utopia waxaad ku dhaafi kartaa faafreebka internetka iyo firewalls -ka, si aad ula xiriiri karto qofkaad rabto, markaad rabto. Nidaamka deegaanka ee Utopia wuxuu dammaanad qaadayaa xorriyadda hadalka. Goobta jireed ee isticmaalaha lama shaacin karo. Isgaarsiinta iyo xogta lama xiri karo mana akhrin karo dhinac saddexaad. Dhammaan xogta koontada waxaa lagu kaydiyaa aaladda maxalliga ah ee isticmaalaha Utopia oo ku jira fayl sir ah".
Maxay Utopia siisaa adeegsadeyaasheeda?
Isgaarsiin sugan oo adkaysi u leh xakamaynta: Si loo gaaro oo loo gaarsiiyo qoraalka, codka, iyo isgaarsiinta emaylka si deg deg ah loo qariyay.
Jeebka isku -dhafan, CryptoCards iyo API ganacsatada: Si ay adeegsadayaashu wax ugu samayn karaan uguna ururin karaan lacagaha Crypton, Lacagta elektaroonigga ah ee Utopia. Nidaamka deegaanku wuxuu kaloo adeegsadaa crypto deggan oo la yiraahdo Utopia USD (UUSD) oo ku xidhan qiimaha $ 1.
Nidaamka Isweydaarsiga Crypto-hantida oo lagu dhex daray mashiinka Utopia laftiisa (Isweydaarsiga Crypton): Kaas oo siiya adeegsadayaasha diiwaangelin koonto oo aan la garanayn oo iswada ah, moodal lacag yar ama aan lacag lahayn, ka -noqosho otomaatig ah oo aan xad lahayn, iska -caabbinta faafreebka, muujinta wada -hadalka bulshada, iyo ixtiraam dhab ah oo ku aaddan jawaab -celinta isticmaalaha.
Shabakad P2P baahsan: Meesha aysan jirin server -yo dhexe oo adeegsade kasta uu yahay router network.
Qasabad fudud: Isku -xirka shabakadda ee kuu oggolaanaya inaad ku guuleysato jajab aan kala sooc lahayn ee Crypton (CRP) adoo adeegsanaya biraawsarka shabakadda Idyll ee isku -dhafan, kaliya hal Jeer.
Naqshad ixtiraamaysa qarsoodi: Utopia waxay dammaanad qaadeysaa asturnaanta isticmaaleyaasha, maadaama cinwaanka IP -ga iyo aqoonsigooda aan la shaacin karin.
Hirgelinta UN: Nidaamka magac -bixinta lahaanshaha ee Utopia Platform, kaas oo bixiya diiwaangelin dhab ah oo aan baahsanayn, oo u dhiganta DNS -ka caadiga ah.
Badbaadinta aaminka ah iyadoo la adeegsanayo biraawsarka isku -dhafan ee Idyll: Kaas oo u shaqeeya beddelka biraawsarka Tor oo u sahlaya in lagu dhex socdo nidaamka deegaanka Utopia.
Kaydinta nabdoon iyo gudbinta: Adigoo adeegsanaya 256-bit AES encryption iyo qalooca xawaaraha sare25519.
Sida loo hirgeliyo Utopia GNU / Linux?
Marka xigta waxaan tusi doonaa shaashadaha isku xigxiga ee soo dejiso, rakibo, habeeyo oo adeegsato codsiyada Platform -ka "Utopia". Waxaa xusid mudan in, kiiskan wax ku oolka ah aan u adeegsan doonno kan caadiga ah Dib u soo celi Linux loo yaqaan Mucjisooyinka GNU / Linux, taas oo ku saleysan MX Linux 19 (Debian 10), taasna waxaa la dhisay iyadoo la raacayo kuweenna «Hagaha Snapshot MX Linux».
Tallaabada koowaad, waa inaad soo dejisaa baakadaha 2 u dhigma "Utopia" ee Linux in uu rasmiga ah download qaybta. Midda hore waa tan u dhiganta is -dhexgalka garaafyada ee deegaanka, oo ah isugeyn (Windows, MacOS iyo Linux) kan labaadna waa kan u dhigma Macdanta bot oo leh xusuusta RAM taasi kaliya ayaa loogu talagalay Linux.
Marka labadaba la soo dejiyo, waxaad sii wadi kartaa tallaabooyinka soo socda:
Ku rakib GUI ee deegaanka 'Utopia': Amarka amarka soo socda ee terminal (console)
Fulinta isku -xirka garaafyada ee hab -nololeedka «Utopia»: Iyada oo la marayo Liiska Codsiyada.
Bilaabidda qaabeynta GUI ee deegaanka 'Utopia'.
Qaybta xaqiijinta macdanta ee isku -xirka garaafyada ee deegaanka 'Utopia'
Rakibaadda bot macdanta ee deegaanka 'Utopia': Amarka amarka soo socda ee terminal (console)
Isticmaalka “Utopia” Bot Mining Bot: Amarka amarka soo socda ee terminal (console)
Habka ugu talagalka ah: Isticmaalka dariiqa caadiga ah iyo ereyga furaha nidaamka, taas oo ah, cinwaanka furaha guud ee la soo saaray ama Aqoonsiga Utopia Wallet (uWallet).
Qaab kale: Adigoo adeegsanaya dariiqa saxda ah iyo ereyga furaha nidaamka, taas oo ah, cinwaanka furaha guud ee la soo saaray ama aqoonsiga Utopia Wallet (uWallet).
Adeegso biraawsarka Idyll ee ku dhexjira.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Bot Mining
Maskaxda ku hay in si aad u isticmaasho Bot Macdanta ugu yaraan heshiis wanaagsan Xusuusta RAM (4 GB) la heli karo iyo a internet wanaagsan leh fudud IP dadweynaha. Iyo in lagu taliyay amniga kombiyuutarka, in la isticmaalo bots -ka macdanta ee kombiyuutarrada ka duwan kombiyuutarrada laga soo bilaabo meesha interface -ka garaafiga ah si loo helo Platform -ka loo adeegsado. "Utopia".
Si kastaba ha ahaatee, hal kombiyuutar oo jir ahaaneed ayaa loo isticmaali karaa in lagu galo Interface -ka Garaafka si loo helo Madal. "Utopia" leh hal ama ka badan Mashiinnada Virtual (MV) ku saabsan isla Bots macdan ah loo baahan yahay.
Adigoo adeegsanaya qasabadda si aad u hesho qayb bilaash ah oo ah Crypton (CRP)
Si kastaba ha noqotee, kuwa aan karin karin Crypton iyagoo adeegsanaya GNU / Linux Mining Bot, maadaama aysan haysan IP -ga dadweynaha oo go'an, RAM ku filan ama Internet tayo leh, waxaa jira hab sahlan oo lagu heli karo hal mar, Crypton oo lacag la'aan ah adoo adeegsanaya Utopia. Miisaaniyado ka mid ah waxyaabo badan ayaa loo isticmaali karaa in lagu abaalmariyo / taageero / bixiyo / loogu deeqo dadka kale ee adeegsada GNU / Linux. Waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda, hal mar:
Fur barnaamijkeena utopia.
Fur biraawsarka isku -dhafan ee Idyll.
Ku qor url -ka "http: // qasabadda" barta raadinta / cinwaanka.
Ku gal shabakadda furan ee furaha guud (jeebka) si aad u hesho jajabyada Crypton (CRP) ee bilaashka ah, dhammaystir koodhka captcha ee la muujiyey oo guji badhanka "Hel Crypton Free", si Crypton (CRP) loogu diro our uWallet isla markiiba.
Sug dhowr ilbidhiqsi oo xaqiiji wareejinta lacagaha ee uWallet ee barnaamijka Utopia.
Macluumaad intaas ka badan oo la xiriira
Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato kooxda ka dambeysa "Utopia" iyo madasha lafteeda "Utopia" waxaad booqan kartaa kuwan soo socda xiriiro rasmi ah oo wargelin ah:
Bogga rasmiga ah FAQ
Beddelka Mareegaha Badbaadinta Badeecadaha (FAQ)
Oo haddii ay dhacdo inaad rabto inaad ogaato oo sahamiso mashaariic kale oo xiiso leh, waxtar leh iyo kuwo kale oo u adeegi kara Nidaamyada Fariinta Degdegga ah waxaan isla markiiba ka tagi doonaa xiriirrada daabacaadaha hore ee la xiriira iyaga hoos.
Ugu dambayntii, tan ayaannu rajaynaynaa xiise leh, ka duwan oo wax soo saar leh DeFi, maaddaama, haddii la dayactiro, la hagaajiyo oo la bato waqti ka dib, waxay aad u noqon doontaa mid aad waxtar u leh oo faa'iido u leh dadka isticmaala GNU / Linux.
Gaar ahaan haddii "Utopia" ama kuwa kale Mashaariicda DeFi noocaan ah ayaa bilaabaya in lagu daro GNU / Linux Distros. Dabcan, had iyo jeer laga bilaabo bilowgii in wax walba Mashruuca DeFi, sidoo kale noqo intii suurtogal ah ama gabi ahaanba furan oo xor ah. Caddayntan waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in hadda, "Utopia" Ma aha mashruuc gebi ahaanba bilaash ah oo furan, laakiin waxaa suurtogal ah in mustaqbalka uu noqon doono mid dadka oo dhan ka faa'iideysta, marka mashruucu si fiican u bislaado oo camiran yahay.
Shaki la'aan, noocan ah Mashaariicda DeFi ogolaan lahaa lacag ka samaysato adeegsiga Nidaamyada Hawlgalka oo bilaash ah oo furan ku saleysan GNU / Linux iyada oo loo marayo crypto gaar ah ama u gaar ah oo leh si fudud qaddar wanaagsan Xusuusta RAM (4 GB) la heli karo iyo a internet wanaagsan leh fudud IP dadweynaha. Kaas oo aad ula jaanqaadaya oo leh fikrad hore oo la kashifay oo laga akhrisan karo daabacaadan hore ee la xidhiidha:
Soo koobid, "Utopia" waa qabow oo xiiso leh Mashruuca DeFi taasi ma aha oo kaliya mid aad u fiican qalabka internetka ee dhammaan noocyada isticmaalaha, iyadoon loo eegin desktop -ka ama kombiyuutarrada gacanta ee la isticmaalay iyo Nidaamyadooda Hawlgalka la adeegsaday, laakiin marka la eego kiiska gaarka ah Linuxers iyo GNU / Linux Distros waxay leedahay faa'idada abuurista faa'iidada ee dunida Cryptocurrencies.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Utopia: Nidaamka xiisaha leh ee baahinta P2P ee ku habboon Linux
Hubaal mashruucani waa lacag la'aan ama il furan. Uma maleynayo inaad arki karto koodhka mashruucan. Marna ma hubi karno waxay qabato annaga oo aan awoodin inaan aragno koodhka. Ma sidaasaa?
U jawaab Mnel
Salaan, Maanle. Waad ku mahadsan tahay faalladaada. Sidaan ku soo xusnay maqaalka, ayaa sheegay in mashruuca DeFi uusan 100% furan, kaliya qeyb ka mid ah. In kastoo, waxaan rajaynaynaa in muddo ka dib horumariyayaashu ay ka dhigi doonaan 100% mid furan oo laga yaabo inay xitaa lacag la'aan tahay. Hadda, waxay u baahan tahay inay koraan, horumariso oo wax badan horumariso, gaar ahaan marka la eego waxa xorta ah oo furan, si ay u noqoto xalka IT -ga ugu habboon ee adeegsadayaasha Linux. Waqtigan xaadirka ah, sida cinwaanku sheegayo waa "Xiisad baaxad leh oo baahsan oo P2P ah oo ku habboon Linux." Taasna haddii aan ku guuldaraysanno, waxaan rajaynaynaa in horumariyayaal kale ama bulshooyinku ay abuuri doonaan 100% kale oo la mid ah oo bilaash ah oo furan IT.
Koodhka isha xiran ee codsigan aad buu ugu habboon yahay - xasuusnoow inta hacks iyo fargeeto codsiyada furan ee haysta. Wax kastaa waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo khasaare, laakiin waxaan qabaa in hoos hawlaha utopia, wax walba si fiican loo qabtay.
Ku jawaab Keven
Waad ku mahadsan tahay, Kevin. Waad ku mahadsan tahay faallooyinkaaga oo noo sheeg aragtidaada ku saabsan Utopia.
Utopia waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dhammaan-hal-beegga deegaanka ee aan waligey isticmaalo! Si raaxo leh oo qarsoodi ah, maxaa kale oo aad u baahan tahay?
U jawaab Islaax
Salaan, Islaax. Waad ku mahadsan tahay faallooyinkaaga oo noo sheeg khibradaada ku saabsan app-kan.
GameMaker Studio 2: IDE loogu talagalay Ciyaaraha 2D Hadda Loo Heli Karo Linux